Idatha enkulu kukuTsala ukuThengisa kwiXesha laNgoku | Martech Zone
Lwesine, Matshi 3, 2016 NgoMgqibelo, uJanuwari 14, 2017 UChris Hoyt
Abathengisi bahlala befuna ukufikelela kubathengi babo ngalo mzuzu ulungileyo- kwaye benze njalo phambi kwabo bakhuphisana nabo. Ngokufika kwe-Intanethi kunye nexesha langempela kubahlalutyiIxesha elibekiweyo lokuchaphazeleka kubathengi bakho liyancipha. Idatha enkulu ngoku yenza ukuthengisa ngokukhawuleza, ukuphendula ngakumbi, kunye nobuntu ngakumbi kunangaphambili. Inani elikhulu lolwazi kunye namandla ekhompyuter kwilifu, efumaneka ngokufikelelekayo kwaye ifikeleleka, kuthetha ukuba namashishini amancinci angaphendula kwiimarike ngexesha lokwenyani, azi iimfuno zabathengi kunye neemfuno zabo (mhlawumbi ngaphambi kokuba benze), kwaye baqikelele kwaye lindela utshintsho.
Yintoni ukuThengisa ngeXesha langempela?
Intengiso yexesha lokwenyani ibhekisa ekubeni nakho ukufikelela kubathengi kanye ngexesha abalifunayo okanye baya kuwuphendula umyalezo wakho. Ikwathetha ukuba ungathetha nabathengi bakho kwimeko yomzuzu. Ukuthengisa ngokwesiko kucwangciswe kwangaphambili ngokubhekisele kwiindlela ezilungileyo, ixesha lonyaka okanye ishedyuli yohlobo. Intengiso yexesha lokwenyani icwangcisiwe ngokufanelekileyo ngokubhekisele ekuziphatheni, kwi-persona kunye nendawo yomamkeli ekujoliswe kuye. Ihlala ikwenziwa ubuqu ngokunjalo.
Ngexesha le-Super Bowl ka-2013, xa umbane waphelayo, u-Oreo watyhala intengiso ngaphandle kwimizuzu nje embalwa eyathi “Usengadada ebumnyameni.”
Lowo ngumzekelo nje omnye omnandi. Ngamandla ngakumbi, ekujolise kuko kunokusebenzisa imikhwa yokuthenga ukubona utshintsho kubomi kunye nokunikezela ngesaphulelo semveliso kubathengi, kude kube kwinqanaba lokoyikisa (jonga inqaku kuThagethi usazi xa abathengi bekhulelwe). Kananjalo abathengisi abakwi-Intanethi, njengamaAmazon, bafundile ukulindela ukuba ungaphantsi nini kwiimveliso ezinokusetyenziswa ezibangela ukunikezelwa kwezikhumbuzo.
Ukuya kwinqanaba elincinci, ukufudumeza kunye nokupholisa iinkampani ezinokusebenzisa imbali edlulileyo kunye nedatha yemozulu ukuqikelela ukuba ibango linokuphatha ivolumu eninzi ngakumbi kuneenkampani ezilinde nje ukuba iifowuni zikhale, kuba zilungiselela izixhobo ngaphambi kwexesha. Iindawo zokutyela zingasebenzisa iipateni zokuthenga ukuqikelela ukuba loluphi uhlobo lokutya abathengi abakhetha ngamaxesha ahlukeneyo onyaka. Ngokwenyani akukho shishini lingenakho ukuxhamla ekusebenziseni idatha ukuqikelela, ukulindela, kunye nentengiso kubathengi babo ngexesha lokwenyani.
Uhlanga oluya komnye
Ukuthengisa ngokwesiqhelo bekungokubanzi kwabantu kunye neenkolelo. Baninzi kakhulu abantu ehlabathini, iinkampani aziziva ngathi zinokufikelela kubantu kwinqanaba ngalinye. Ubukhulu becala, abantu bayayiqonda kwaye bayayinyamezela le ngqondo "yentengiso enkulu". Nangona kunjalo, njengoko iDatha eNkulu iyaqhubeka nokukhula, abantu baqala ukulindela ukuphathwa njengabantu ngabanye.
Ingabonakala ngathi iyaphikisana, "IINKCUKACHA ZENKQUBO zingenza njani ukuba abantu babonakale?" Ngapha koko, yiyo loo nto yenza ukuba iDatha eNkulu ibe namandla. Imikhwa, imikhwa, ukhetho, kunye nokuziphatha komntu ngamnye kulula ukufumanisa kwaye uqonde xa unedatha engaphezulu onokuyifumana kuyo. Ngedatha encinci, sonke sihlala sizinzile. Ngedatha ethe kratya, sinokuqala ukulungelelanisa ukungafani kwabaxhasi bethu.
Kwiimarike ezikhuphisanayo, amashishini anokusebenzisana nabathengi kwinqanaba elilelinye baya kuphumelela abo bangaboni ngaphaya "komthengi ophakathi." Sikwigqatso lokuya komnye.
I-eBook ESIMAHLA “Ukuthengisa ngesantya seShishini”
Ukufunda ngakumbi malunga nendlela iDatha eNkulu etshintsha ngayo ukuthengisa, kwaye ubone izifundo ezinje malunga nendlela abathengisi, abavelisi, kunye neenkampani zokhathalelo lwempilo zisebenzisa loo datha ukunika amandla ukuthengisa kwabo ngexesha lokwenyani, besiya Perscio kwaye ukhuphele iphepha lethu elimhlophe.
Khuphela ukuThengisa kwiSantya seShishini
tags: idatha enkuluukuthengisa idatha enkuluiphepha elimhlopheukuthengisa ngesantya seshishinioreoPerscioIxesha elilungileIdatha enkulu yexesha lokwenyaniUkuthengisa okwenyaniTwitterWhitepaper
UChris nguMlawuli weNtengiso we Perscio, iqabane lishishini lijolise ekudaleni amathuba eDatha eNkulu kubaxumi babo, apho athe wakhulisa uphawu kunye nemiyalezo evela emhlabeni, ukusuka kwilogo ukuya kwintengiso yokuthengisa.